I-Rumbley Cottage kwi-Tangier Sound - I-Airbnb
I-Rumbley Cottage kwi-Tangier Sound
11/1-5; 11/28-12/26 IVULIWE
Indlu esemaphandleni eyakhiwe ngendlela ekhethekileyo, yenza kubekho indawo ethe cwaka kwindalo. Ukusuka kwigumbi lokuhlala, ujonge icala elinye ukuya kumlomo woMlambo iManokin kwiTangier Sound kwaye kwelinye icala umphandle omkhulu weendawo ezinamanzi. I-Rumbley Cottage yonwatywa unyaka wonke kunye nendawo yomlilo entle kwaye sinikezela ngeenkuni. Ezininzi, izinto ezinokusetyenziswa ezininzi eziquka iWifi (entsha ka-2022), izinto zokuthambisa zaseMolton Brown, ii-kayak, iibhodi zokuqhuba amaphenyane neebhayisekile. UNGAQINISEKISI IMALI YOKUCOCA OKANYE YEZILWANYANA ZASEKHAYA.
Le asiyiyo i-Rehobeth Beach okanye i-Ocean City. Yenzelwe abantu abakhangela iholide elunxwemeni, ukuqubha kumaza amancinci, ukubukela ii-ospreys eziselunxwemeni, ukubukela ii-sunsets, ukufunda kwiveranda. Siyazamkela izinja ezisebenzisana nazo, kodwa ke, zifuna ukuba zirhoxe ngalo lonke ixesha xa zingaphandle kwendlu ngenxa yezilwanyana zasendle. Nceda uqaphele: Iiyadi ezingamakhulu amabini zokugqibela zikwindlela engabonakaliyo.
"Ingingqi" yindlela encinci yelizwe enezindlu kwicala lasekhohlo lendlela enye engaselunxwemeni kunye neendawo ezinamanzi kwicala lasekunene. Kukho iindawo ezintathu zokunyuka intaba kwiindawo ezinamanzi zokubukela iintaka kwi-Fairmount Wildlife Management Area ekumgama oziikhilomitha nje ezimbalwa. Sinikezela ngee-kayaks kunye neebhodi zokutyibiliza emanzini ukuze uzonwabise ngesandi kunye neebhayisekile zokuqhuba ibhayisekile kule ndawo (zonke kwiindlela ezithe tyaba).
Sisoloko sifumaneka ngefowuni okanye nge-imeyile. Bobabini uKristina noAlexandra bajonga unxibelelwano.